Basikety – “Afrika 3×3”: raraka teo amin’ny ampahefa-dalana ny Malagasy | NewsMada
Basikety – “Afrika 3×3”: raraka teo amin’ny ampahefa-dalana ny Malagasy
Nidina ny haavo tekinika ny ekipa Malagasy, nandritra ny fiadiana ny “Amboara afrikanina 3×3”, andiany faharoa, taranja basikety. Raraka teo amin’ny lalao ampahefa-dalana, nifandonana tamin’ny RD Congo, i Madagasikara, omaly, tany Lome, Togo.
Lavon’ny ekipan’i Congo, tamin’ny isa 16 no ho 9, ny ekipa malagasy rehefa avy niady mafy tamin’ny ampahefa-dalana. Nisongadina anefa i Madagasikara nandritra ny andro voalohany tamin’ity fifaninanana ity. Nitazona ny laharana voalohany tamin’ny vondrona nisy azy ny ekipa malagasy, na nisy aza ny faharesena nanoloana an’i Burkina Faso. Raha ny voka-dalao, isa 13 no ho 11, ny nisarahan’i Madagascar sy i Burkina Faso, ny asabotsy 10 novambra lasa teo, raha toa ka isa mavesatra, 21 no ho 10, ny nandavoan’ny Malagasy ny ekipan’i Togo. Ity lalao nifanandrinana tamin’i Togo ity izay nitondra ny ekipa malagasy ho amin’ny ampahefa-dalana. Tsy teo am-pelatanana intsony anefa ny vintana nanomboka teo. Tetsy ankilany, tsy nisy loatra ny fanomanana sy ny fanazarantena raha oharina ny tamin’ny taon-dasa ka mety ho sakana tsy nahazoana vokatra tsara izany.
Nihemotra ny laharan’ny Malagasy raha oharina ny tamin’ny taon-dasa. Azo lazaina ho mazava ihany anefa ny vokatra azo satria tsy nitovy tamin’ny taona 2017 ny fikarakarana natao tamin’ireo atleta malagasy. Nanana tanjaka sy tsara tohana mantsy ny ekipa malagasy nandritra ny lalao tamin’ny taon-dasa. Raha ny loharanom-baovao azo, efa sahirankirana ihany ny eo anivon’ny federasiona malagasy ny taranja basikety vao nanana fahafahana nentina nanohanana ireto ekipa malagasy ireto hiatrika ity lalao tany Togo ity. Na teo amin’ny mpilalao aza, tsy maintsy nasiana sivana ihany vokatr’izay tsy fahampiana izay. Tsahivina fa nahazo ny tapakila niatrehana ny manasa-dalana ny Malagasy tamin’ny taon-dasa ary teo amin’ny laharana fahatelo no nisy an’i Madagasikara.
Nifarana, omaly alahady 11 novambra, ity fifaninanana ity ka nifanandrina tamin’ny lalao famaranana ny ekipan’i Ouganda sy i Côte d’Ivoire, saingy tsy mbola teto am-pelatanana ny valin-dalao hatramin’ny ora nanoratana.